Izindaba - I-COVID 19 Test Antigen Rapid Ibhaliswe ngempumelelo eJalimane
Isivivinyo se-COVID 19 se-Antigen Rapid sibhaliswe ngempumelelo eJalimane
I-Immunobio COVID 19 Antigen Rapid Test Kit ibhaliswe ngempumelelo eJalimane. Imiphumela yokuhlolwa kokubhalisa ikhombisa ukuthi imikhiqizo yethu inokusebenza okuhle futhi yaziwa kakhulu ngamakhasimende
Ubhadane olusha (i-COVID 2019) lwagqashuka ngasekupheleni kuka-2019 lwakhukhula iChina ekuqaleni konyaka wezi-2020. Wonke umsebenzi we-IMMUNOBIO wayekhathazekile ngokwakhiwa kwalo bhubhane futhi ufuna ukufaka isandla ekulweni nalesi sifo. Ithimba le-R & D lenze ngempumelelo ikhithi yokuhlola ngokushesha ye-COVID 2019 IgG / IgM ekuqaleni kukaFebhuwari 2020, kwathi ngoSepthemba 2020, ithimba le-R & D lathuthukisa ngempumelelo ikhithi yokuhlola ukutholwa kwe-antigen ye-2019-ncov.
Ithimba lethu le-R & D lithole ukuthi ukuhlolwa kwe-antigen ka-2019-ncov emakethe noe kulula kakhulu ukukhiqiza ukukhohlisa okungamanga uma kusetshenziswa kumathe swab. Ukuze kunqotshwe le nkinga, onjiniyela benze ucwaningo olukhulu lokuqhathanisa ithuluzi lokuhlola i-AG emakethe. Ngemizamo engapheli, iqembu le-R & d ligcina lithuthukise ikhithi yethu yokuhlola i-antigen ye-2019-ncov, engagcini ngokufaka icala lokuhlolwa kwamakhala we-nasal, kepha futhi esebenza ekuhlolweni kwe-Saliva swab. Senze izinkulungwane zokuhlolwa kweSaliva ngaphambi kokubeka ikhithi emakethe, akekho owazama ukuphuthelwa okukhona.
Ikhasimende lethu laseJalimane uMnu uMXX lifunde ukuthi i-IMMUNOBIO COVID 19 Antigen test kit ingasetshenziswa ukuthola amathe, ngokushesha yathatha isinqumo sokubhalisa lo mkhiqizo eJalimane iwuthengise. Sinikeze isampula yokuhlolwa kwesampula yeSaliva esivivinyweni sokubhalisa, futhi imiphumela yokubhalisa ikhombisa ukuthi ukuzwela nokucaciswa kwe-reagent yethu yokuthola i-antigen kuhle kakhulu. Ukuzwela kokutholwa kwesampula kungu-100%, futhi imininingwane ingu-95.6%.
Njengamanje, umkhiqizo ubhaliswe ngempumelelo futhi wathengiswa eJalimane, futhi ubhaliswe ngempumelelo e-European Union.